Mi 8 Explorer Edition ရဲ့ ကျောပြင်အဖော်အချွတ်က လိမ်ဆင်ကြီး – Myanmar Mobile App
Mi 8 Explorer Edition ရဲ့ ကျောပြင်အဖော်အချွတ်က လိမ်ဆင်ကြီး
Posted on August 2, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
Xiaomi Mi 8 ဆိုတာက . . . အင်း iPhone X clone လို့ပြောရမလား။
ဒါပေမယ့်လည်း Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ကတော့ အချက်အလက်ပိုင်းတွေကအစ ခြားနားပြီးတော့ ပြောင်မြောက်တဲ့အဖော်အချွတ်ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ အဲဒီကောင်လေးတွေက ဖုန်းကိုတွန်းတင်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်လား။ အနောက်ဘက်မှာ တွေ့မြင်နေရတဲ့ အတွင်းပိုင်း circuit board ဆိုတာက ရှိုးပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့ အောက်မှာ တကယ့် circuit ရှိပါတယ်။ ဒါကိုတော့ Android Police ရဲ့ ဖော်ထုတ်ချက်အရ သိရတာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ စမတ်ဖုန်းအတွက် ဒီဇိုင်းသက်သက်သာ circuit board ကို ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Mi 8 ထက်တော့ ထူမသွားအောင်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်မယ့်အစား အသုံးဝင်တဲ့ နားကြပ်ပေါက်လေးထည့်လိုက်ပါတော့လား။ မစဉ်းစားတတ်တော့ပါဘူး။
iPhone X ဟာ နားကြပ်ပေါက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာသိပ်မကောင်းတော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တာပဲ။
Xiaomi ကတော့ မေလတုန်းက Explorer Edition မှာ ပြထားတဲ့အရာတွေက တကယ့်အစစ်တွေလို့ ပြောထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြထားတဲ့အရာတွေက စတစ်ကာ၊ hologram လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
ပုံလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ အရာအားလုံးက စီစီရီရီဖြစ်နေတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ BGA pad မပါဝင်ပါဘူး။ ဒီတော့ component တစ်ခုချင်းစီကို ဆက်သွယ်ထားတာမျိုး မရှိတော့ပါဘူး။
ဒါဆိုရင် circuit board က အစစ်ဖြစ်မယ်ထားလိုက်တော့ အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။
Xiaomi ဟာ Mi 8 Explorer Edition ရဲ့ စွဲဆောင်မှုလေးကို အစစ်လို့ပြောထားပေမယ့်လည်း အတုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့မြတ်နိုးမှုကို ထိခိုက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်မှ ဆိုးရွားလိုက်လဲ။
Xiaomi Mi 8 ဆိုတာက . . . အငျး iPhone X clone လို့ပွောရမလား။
ဒါပမေယျ့လညျး Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ကတော့ အခကျြအလကျပိုငျးတှကေအစ ခွားနားပွီးတော့ ပွောငျမွောကျတဲ့အဖျောအခြှတျဒီဇိုငျးကို အသုံးပွုထားပါတယျ။
ဒီနရောမှာ ပွောခငျြတာတဈခုကတော့ အဲဒီကောငျလေးတှကေ ဖုနျးကိုတှနျးတငျပေးနိုငျမယျလို့ထငျလား။ အနောကျဘကျမှာ တှမွေ့ငျနရေတဲ့ အတှငျးပိုငျး circuit board ဆိုတာက ရှိုးပွထားတာဖွဈပွီးတော့ အောကျမှာ တကယျ့ circuit ရှိပါတယျ။ ဒါကိုတော့ Android Police ရဲ့ ဖျောထုတျခကျြအရ သိရတာဖွဈပါတယျ။
တဈနညျးပွောရမယျဆိုရငျတော့ စမတျဖုနျးအတှကျ ဒီဇိုငျးသကျသကျသာ circuit board ကို ပွထားတာဖွဈပါတယျ။ Mi 8 ထကျတော့ ထူမသှားအောငျလုပျထားပါတယျ။ ဒီလိုလုပျမယျ့အစား အသုံးဝငျတဲ့ နားကွပျပေါကျလေးထညျ့လိုကျပါတော့လား။ မစဉျးစားတတျတော့ပါဘူး။
iPhone X ဟာ နားကွပျပေါကျမရှိတဲ့အတှကျကွောငျ့ စိတျဝငျစားစရာသိပျမကောငျးတော့ဘူးလို့ ကြှနျတျောထငျတာပဲ။
Xiaomi ကတော့ မလေတုနျးက Explorer Edition မှာ ပွထားတဲ့အရာတှကေ တကယျ့အစဈတှလေို့ ပွောထားခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပွထားတဲ့အရာတှကေ စတဈကာ၊ hologram လိုမြိုးမဟုတျပါဘူး။
ပုံလေးကိုမွငျလိုကျတာနဲ့ အရာအားလုံးက စီစီရီရီဖွဈနတောကို တှမွေ့ငျရမှာပါ။ BGA pad မပါဝငျပါဘူး။ ဒီတော့ component တဈခုခငျြးစီကို ဆကျသှယျထားတာမြိုး မရှိတော့ပါဘူး။
ဒါဆိုရငျ circuit board က အစဈဖွဈမယျထားလိုကျတော့ အလုပျမလုပျနိုငျတော့ပါဘူး။
Xiaomi ဟာ Mi 8 Explorer Edition ရဲ့ စှဲဆောငျမှုလေးကို အစဈလို့ပွောထားပမေယျ့လညျး အတုဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ သငျ့ရဲ့မွတျနိုးမှုကို ထိခိုကျသှားစနေိုငျပါတယျ။ ဘယျလောကျတောငျမှ ဆိုးရှားလိုကျလဲ။
18:9 Screen နဲ့ ဈေးနှုန်းချိုတဲ့ Meizu V8 နဲ့ V8 Pro
Meizu က စမတ်ဖုန်း အသစ်နှစ်လုံးကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ V8 မှာ တန်ဖိုးနည်း စွမ်းရည်နိမ့် ဖုန်း ဖြစ်ပြီး ၅.၇ လက်မ 18:9 Screen ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ နောက်တစ်လုံးက V8 Pro ဖြစ်ပြီး ယွမ် ၈၀၀ ( ၁၁၅ ဒေါ်လာ) နဲ့ ယွမ် ၁၁၀၀ ( ၁၆၀ ဒေါ်လာ) အသီးသီး တန်ကြေးရှိပါတယ်။ ဖုန်းနှစ်လုံးစလုံးမှာ 720x1440p Display များ ပါပါတယ်။ V8 မှာ 3200mAh နဲ့ Pro မှာ 3100mAh Battery များ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Chipset , Memory , Camera များက ကွာခြားပါတယ်။ […]
Galaxy Unpacked Event ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ကြေညာမည်
Samsung က ဘာစီလိုနာမှာ ကျင်းပမယ့် Mobile World Congress မတိုင်ခင် တစ်ပတ် အလိုမှာ Galaxy S10 Series များကို ကြေညာမယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ ဆမ်ဆောင်းက Galaxy Unpacked Event ကျင်းပမယ့် နေ့ကို အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ လာမယ့်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တွစ်တာမှာ ဗီဒီယိုတစ်ခု တင်ပြီး ကြေညာလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှာ အရွယ်ကြီး နံပါတ် ၁၀ ကို ပြသထားပြီး အခြား သတင်းအချက်အလက်များကိုတော့ မပြသထားပါဘူး။ ဆမ်ဆောင်းက Teaser များမှာ မိတ်ဆက်မယ့် ဖုန်းများရဲ့ Specifications များကို အရိပ်အမြွက် ပြောကြားလေ့ မရှိပါဘူး။ တွစ်တာမှ ဗီဒီယိုမှာ […]
Zawgyi Version BLU VIVO X ကို Amazon မှာ စာရင်းတင်ခဲ့တာက ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကပါ။ အခုဆိုရင် ယူအက်စ်အတွက် Blu Vivo တွေကလည်း အဆင်သင့်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ BLU Vivo XL3 ကိုတော့ Android 8.0 Oreo အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ၅.၅လက်မ မျက်နှာပြင်၊ HD+ resolution ၊ 18:9 display aspect ratio တွေလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ mid-range ဖုန်းဖြစ်ပေမယ့်လည်း instant messaging ၊ web browsing ၊ on-the-go entertainment ၊ ဂိမ်းတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ BLU ထုတ်ကုန်တွေဟာ mid-range ပိုင်းမှာ နာမည်ရလာပါတယ်။ BLU […]
မျိုးဆက်သစ် Galaxy Tab S4 10.5 နဲ့ Tab A 10.5 တို့ကို Samsung မိတ်ဆက်